Banyere Anyị - Wilongda Technology Co., Ltd.
Wilongda Technology Co., Ltd. bụ onye nrụpụta nke ụgbọ ala dị iche iche na-anọchi anya mgbe a na-azụ ahịa, igodo akpaaka oghere, igodo transponder, njikwa ntanetị. Nke kpuchitere ihe karịrị ụdị ụgbọ ala 60 ndị pụtara Audi, BMW, Mercedes, Volks Wagen, Renault, Peugeot , Citroen, Fiat, Ford .... ngwaahịa na-ere ụwa niile, isi na USA, Europe, South America wdg, nabata ndị mmekọ OEM na ODM ka ha sonyere anyị.
Na-ekwe nkwa na Ogo.
Hazie oge gị.
● Na-arụ ọrụ na mmefu ego gị.
"Ogo bụ ndụ anyị, ọrụ bụ mkpụrụ obi anyị!" bụ nkwenye nke ọrụ anyị. Dabere na teknụzụ dị elu, ọrụ otu na ọkachamara, anyị na-ejikwa ọnụ ahịa site na njikwa anyị dị elu, ka anyị wee nwee ike ịnye ngwaahịa dị elu yana ọnụahịa ezi uche dị na ya. Anyị Aims na àjà ndị kasị pụrụ ịdabere na ọrụ ozi anyị zuru ụwa ọnụ na-asọpụrụ ahịa.
Wilongda Technology Co., Ltd na-agbaso amụma azụmahịa nke "Ogo dị elu karịa ihe niile, ọrụ na-eme ọdịnihu", ma na-agbaso ogo ogo nke mbụ na mmepe teknụzụ. Site na-aga n'ihu mma nke ụlọọrụ management na unremitting mgbalị na-achọ igosipụta ogologo oge ekwenye mmekọahụ, anyị ji ezi obi na-enye ndị ahịa anyị na-eduga ngwaahịa na ọrụ. Anyị ga-anọgide na-azụlite ma na-emepụta ọzọ na mma ngwaahịa ndị ahịa ndị kpọrọ àgwà na ika oyiyi.
Site na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ igodo ụgbọ ala, anyị ga-agbasochi mmepe nke teknụzụ ngosipụta ọkaibe nke ụwa, bụrụ ihe ezi uche dị na ya ma na-agbanwe agbanwe, ma na-emeziwanye mgbe niile!
A na-anabata ndị ahịa ịjụ ma nye ngwaahịa anyị iwu.
(Ebumnuche ụlọ ọrụ:
Nye ngwaahịa dị elu ma zụọ ndị ọrụ dị elu.
Duru na mmepe nke LCD ụlọ ọrụ na-a mbụ na klas emeputa nke ụgbọ ala igodo! )
--- Ndị mmadụ na-adabere, na-achọ eziokwu site na eziokwu, na-akwado ihe ọhụrụ, ma na-eche mgbe niile)
(Azụmaahịa azụmaahịa: --- Ogo dị elu, ihe ọhụrụ, iguzosi ike n'ezi ihe, ihe siri ike
Akwa: nye ngwaahịa na ọrụ ntanetị dị mma
Innovation: Ngwa nke teknụzụ ọhụụ yana ihe okike na ngwaahịa na teknụzụ ọhụụ
Iguzosi ike n'ezi ihe: Enterprise bụ ntọala nke mmepe ụlọ ọrụ. Enweghị iguzosi ike n'ezi ihe, ọ dịghị ihe ọ bụla
Siri ike: Sọsie ike ịchọrọ onwe anyị, jiri nlezianya na-ejikwa mmekọrịta ndị ahịa, ma nye ndị ahịa ngwaahịa dị mma na ọrụ teknụzụ